Hafatry ny Eveka, Novambra 2013 - Fihirana Katolika Malagasy
Hafatry ny Eveka, Novambra 2013
Daty : 17/11/2013
Maneran-tany dia mitombo tsy miato ny hantsana eo amin‟ny fari-piainan‟ny zanak‟olombelona. Manompo sarin-janak‟omby volamena indray ny mpanankarena sy mpomba azy, hoy ny Papa Ray Masina François. Tsy mampiraika intsony ny loza sy famonoana ain‟olona maro etsy sy eroa.
Ho antsika Malagasy dia niseho tamin‟ny endrika manokana izany tamin‟ny fifidianana filoham- pirenena fihodinana voalohany teo. Mahazo laka tanteraka ny fifanaratsiana sy fifanavakavaham- pihaviana sy foko ary ny fividianana ny safidim-bahoaka amin‟ny fananam-bola sy harena. Nampitampim-bava ny vahoaka any ambanivohitra ny fampiderana fiara tsy mataho-dàlana sy fitaovana sarobidy isan-karazany toy elikoptera. Hay nisy volabe ihany ka nahoana no tsy nanasoavam-bahoaka hatramin‟izay?
Miavaka roa ny vahoaka malagasy, dia ny mpanefoefo manontany ny ory, sy ny sahirana milomano amin‟ny fahantrana. Tsy mandry fahalemana ary tsy voaaro intsony ny vahoaka maro an‟isa; miroso mankany amin‟ny Fanjakan‟i Baroa sy didin‟ny besandry ny fiaraha-monina.
Ny fanatontoloana dia manao tery vay manta amin‟ny fampiharana ity miralenta ity. Fampitovian-jo no andrandraina kanefa ny fototry ny maha-olona araky ny naharian‟Andriamanitra azy mihitsy no zimbazimbaina, ka zary mampivarina ny lalam-pitondran-tena mitarika any amin‟ny fanapotehana ny aina.
Nohitsakitsahina ny Soatoavina Malagasy eo amin‟ny fanajana ny Fihavanana tena izy, izay miorina amin‟ny tantaram-pirenena sy ny kolon-tsaina ary ny toe-karena, fa ny vola no terena hanjaka hatraiza hatraiza, ka tonga hatrany amin‟ny fangalarana taova sy taola-paty mihitsy aza.
Maro ireo midongy seza ka misakana ny fifandimbiasam-pahefana. Ny tanindrazana mihitsy no viraviraina sy ifandrotehana, fa tsy notompoina hampiadana.
Manampy trotraka ny fanararaotam-pahefana ataon‟ireo vondrona iraisam-pirenena mahita ny fahalementsika. Vokany, rotidrotika ny fihavanana ka tsy afaka mifandamina intsony ny samy Malagasy.
Ny mahagaga koa dia ny fivavahana indray izao no atao tohatra hahazoana seza sy fitondrana. Mampiteny ny moana!
Mitodika aminareo mpirotsaka ho amin‟ny fitondram-bahoaka isan‟ambaratongany izahay:
ianareo ho solombavam-bahoaka sy ho filoham-pirenena.
Aza atao am-paladia ny fiandrianam-pirenentsika. Aza mivarotra tanindrazana. Lolohavy an-tampon‟ny loha ny tena Fihavanana marina.
Katsaho mandrakariva ny soa iombonana ka aza atao tahom-boanjo nahitana ny vahoaka Malagasy; rehefa nahazo toerana ianareo dia hadino ny fampanantenana natao azy, fa ny mpiray antoko na fihaviana na fianakaviana no tompon‟ny tombotsoa rehetra.
Anisan‟ny lohalaharana ny fanasitranana ny ratra vokatry ny krizy ka hanao vain-dohan- draharaha ny fametrahana fanjakana tandalàna antoky ny fandriampahalemana sy fampivoarana ny vahoaka ao anatin‟ny rariny sy ny hitsiny. Atombohy aminareo eo amin‟ny fitondrana ny fanesorana ny toe-tsaina manavakavaka sy ny fiheverana ny sasany ho ambany. Adidinareo ny manome fanabeazana ny vahoaka ho olom-pirenena feno.
Maika ihany koa ny hahatomombana ny fanadiovana ny tontolon‟ny fitsarana sy ny mpitandro filaminam-bahoaka hamerina indray ny fifampitokisana.
Anjaranareo ny miaro ny harem-pirenana sy ny mijery ny fitsinjarana azy ara-drariny hampivelatra ny mahaolona manontolo sy ny olon-drehetra hiadanan‟ny vahoaka Malagasy.
Fantaro fa tsy hisy izany fiorenam-pirenena matotra hampiadana izany, raha tsy voaorina ny tena fihavanana andrianintsika, ao anatin‟ny fifankatiavana marina tsy misy fihatsaram-belatsihy. Maro samihafa ny fomba amam-panao (fomba fiteny, ohabolana, ny fomban-tany ….) fa harena ho antsika ny fahasamihafana raha haintsika ny manaja sy mampiasa azy ho entina mandrava ny fanavakavahana.
Aoka ho sahy hanaja ny hasin‟ny aina sy ny fahamarinana isika, tsy ho mora roboka amin‟ny fihetsika tsy voalanjalanja, toy ny fitsaram-bahoaka sy fandrobana samihafa ary ny kolikoly sy ny tsolotra.
Manana adidy isika hiaro sy hikolokolo ny tontolo iainana izay tena simba tokoa ka mitera-doza amin‟ny fiainantsika andavanandro. Jereo ny toe-tany sy faritra maro: tsy mirindra intsony ny rotsa-korana… maty ny tantely sy ny biby madinika mahasoa isan-karazany ka mandrava ny rindran-damina voajanahary.
Manana adidy tsy azo ialàna isika mianakavy ka „ndeha hifanolo-tànana amin‟ny fanorenana ny ampitso, tsy ho babon‟ny akanga tsara soratra, ka hanary ny fahendren-drazana; tsy ho taitran‟ny doka sy varotra, ka hanary ny finoana itafiana. Tohizintsika hatrany iny vavaka fangatahana Fandriam- pahalemana iny.
Hankalaza an‟i Kristy Mpanjaka isika ary mamarana ny Taonan‟ny Finoana. Antso sy iraka manokana ho antsika ny fibebahana, ny fandalinana, fankalazana sy hetsika rehetra notanterahina tamin‟iny taona iny. Fanomezan‟Andriamanitra ho antsika ny Papa Ray masina Joany faha-XXIII ( Konsily Vatikana II), sy Joany Paoly faharoa (Katesizin‟ny Fiangonana Katolika sy JMJ) izay hatsangana ho olomasina amin‟ny 27 avrily 2014. Hofohazintsika indray ireo lova masina maro nampianarin‟izy ireo momba ny fiainam-pianakaviana sy ny tsy maintsy ho fahasahianareo tanora, tsy hatahotra ny handray an‟i Jesoa ho namana hampita amin‟ny tena fiainana. Koa hifanao soroka miara- milanja isika, ary handray anjara amin‟ny fandalinana sahady ireo fanontaniana maro entina hanomanana ny sinaody momba ny pastoralin‟ny fianakaviana. Aza miroaroa saina, fa raisintsika am-po indray ny tenin‟i Md. Piera, ka hiara-mandroso lalindalina tokoa hoe: “Tompo ô! hankany amin‟iza moa izahay, Ianao no manana ny Tenin‟ny fiainana mandrakizay”. (Joany 6,68).
1. Mgr TSARAHAZANA Désiré, Arsevekan’i Toamasina, Filohan’ny Fivondronamben’ny Eveka
< Hafatry ny Eveka Volana Mey 2013
JMJ Mada 8, ny 30 jona no fara-fandoavana ny saran-dasy >